Garsoore Graham, Sq1
Maqaallada by Garsoore Graham
Waxaa habboon in Garsooraha uu madaxweyne ka noqdo Sq1, Maaddaama uu ku sugnaa hoggaanka ganacsiga ee dhijitaalka ah xirfaddiisa oo dhan. Kahor intuusan ku biirin Sq1, wuxuu ahaa aasaasihii iyo agaasimihii guud ee mid ka mid ah hay'adaha ugu guulaha badan dhanka teknolojiyada ee Texas. Garsooruhu wuxuu ka caawiyay wakaaladiisa dijitaalka inay kobciso liiska macmiilkeeda si loogu daro shirkado caan ah sida American Airlines, Mountain Dew, Pier 1 Import, Dillard's iyo Radio Shack. Qofka ugu da'da yar ee helay abaalmarinta "Ganacsiga Yaryar ee Sanadka" ee Comdex, (waa mid ka mid ah bandhigyada ganacsi ee ugu weyn iyo soo bandhigida kumbuyuutarka adduunka), Xaakimku wuxuu hormuud u ahaa suuqgeynta dhijitaalka / waxqabadka warbaahinta, khibradda isticmaaleyaasha iyo qaabeynta websaydhka iyo horumarka. in ka badan toban sano.
Iyada oo xaddiga sare ee xogta lagu abuuray kanaallo badan oo suuq-geyn ah, magacyada ayaa lagu xujeeyay inay abaabulaan oo ay firfircoonaan xogta saxda ah ee xogta si loo kordhiyo waxqabadka kanaalka iskutallaabta. Si aad si fiican u fahamto bartilmaameedkaaga bartilmaameedka, wad wadid iibsiyo badan, oo aad u yareyso qashinka suuqgeynta, waxaad u baahan tahay inaad la jaanqaado qaybtaada astaanta ah ee ku shaqeysa dijitaalka iyo warbixinta Waa inaad isku waafajisaa sababta ay wax ugu iibsanayaan kuwa iibsada (qaybta dhagaystayaasha) iyo waxa (waayo-aragnimo) iyo sida (firfircoonida dijitaalka ah) sidaa darteed dhammaantood